ရာသီကုန်မှာ ရန်းနစ်ကို အမြဲတမ်း နည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်မယ့်အစား PL မန်နေဂျာတစ်ဦးကိုသာ ခန့်အပ်ရန် ယူနိုက်တက်ကို တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ မာဆွန် - xyznews.co
ရာသီကုန်မှာ ရန်းနစ်ကို အမြဲတမ်း နည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်မယ့်အစား PL မန်နေဂျာတစ်ဦးကိုသာ ခန့်အပ်ရန် ယူနိုက်တက်ကို တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ မာဆွန်
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နို၀င်ဘာလကုန်က ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ အိုလီဂန်နာဆိုးရှားရဲ့ နေရာမှာ ရှော်ကေး နဲ့ RB လ်ိုက်ပ်ဇစ် နည်းပြဟောင်း ရပ်ဖ်ရန်းနစ်ကို ရာသီကုန်ထိ ယာယီနည်းပြ အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ကာ ဂျာမန် နည်းပြဟာ အဲဒီနောက် ကလပ်ရဲ့ အကြံပေး ရာထူးကို ၂ နှစ် ရယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ရန်းနစ်ဟာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အမြဲတမ်း နည်းပြ ဖြစ်လာဖို့ စိတ်ကူးရှိသူ ဖြစ်ပေမယ့် အိုးထရပ်ဖို့ဒ် ကလပ်မှာ ခက်ခဲတဲ့ တာထွက်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရကာ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်က ဝုဖ်ကို အိမ်ကွင်းမှာ ၁-၀ နဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် အပါအ၀င် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ၃ ပွဲနိုင် ၁ ပွဲသရေ ၁ ပွဲရှုံး ရလဒ်ကို ရရှိထားခဲ့ပေမယ့်လည်း ခြေစွမ်းပိုင်း ကတော့ အားရစရာ မရှိ ဖြစ်နေပါတယ်။
ပေါလ်မာဆွန် ကတော့ ယူနိုက်တက် အနေနဲ့ ရန်းနစ်ကို ရာသီကုန်မှာ အမြဲတမ်း နည်းပြ ခန့်အပ်လိုက်မယ် ဆိုရင် ဒါဟာ မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်သွားမယ်လို့ ခံစား မိနေပါတယ်။ အာဆင်နယ် ကစားသမားဟောင်း ကတော့ ဘရိုက်တန် နည်းပြ ဂရေဟမ်ပေါ်တာရဲ့ အရည်အသွေးကို သဘောကျနေပြီး ၎င်းဟာ ဒီထက် ပိုကြီးတဲ့ အလုပ်နဲ့ ထိုက်တန်မှု ရှိတဲ့သူလို့ ထောက်ခံ လိုက်ပါတယ်။
မာဆွန်က “မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ နည်းပြသစ် ရှာဖွေနေတဲ့ နေရာမှာ ဂရေဟမ်ပေါ်တာကို သတိမထားမိ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေလည်း ဒီအတိုင်း ပါပဲ။ သူဟာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ လာမည့် မန်နေဂျာ ဖြစ်လာဖို့တော့ သ်ိပ်ပြီး အခြေအနေ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီရာသီမှာ ဘရိုက်တန်သာ အက်ဖ်အေဖလားမှာ ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် သူဟာ ရာသီကုန်မှာ ပိုမို ကြီးကြယ်တဲ့ အလုပ်ကို ကမ်းလှမ်းခံရမှာ သေချာပါတယ်။
အသင်းကြီးတွေဟာ အင်္ဂလိပ် လူမျိုး မန်နေဂျာတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး သိပ်ပြီး မထင်မကြီး ဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အင်္ဂလိပ် မန်နေဂျာတွေဟာ ကလပ် အသင်းကြီးတွေမှာ အခွင့်အရေးပေးခံရမှု နည်းပါးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပေါ်တာဟာ အရမ်းကို ထူးချွန်တဲ့ မန်နေဂျာလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ဘရိုက်တန်ဟာ သိပ်မကြာမီက ချဲလ်ဆီးကို စတန်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမှာ အကောင်းဆုံး ယှဉ်ကစား သွားခဲ့တဲ့ အပြင် အဲဗာတန်ကိုလည်း အနိုင် ကစားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကစားဟန် ကလည်း တကယ် ကောင်းပါတယ်။ ပေါ်တာ့ ဆီမှာ အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ အရည်အသွေးတွေ ရှိနေပါတယ်။
ကျွန်တော် ဘရိုက်တန်ရဲ့ ကစားပုံကို အမြဲ စောင့်ကြည့် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘာကြောင့်များ သူ မန်ယူနိုက်တက် မန်နေဂျာ မဖြစ်နိုင်တာလဲ ဆိုပြီး တွေးမိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘရိုက်တန်ပဲ ဖြစ်နေလို့လား? သူဟာ နာမည်ကြီး နည်းပြ မဟုတ်လို့လား? နိုင်ငံခြားသား မဟုတ်လို့လား? ကျွန်တော် ကတော့ သူဟာ မန်ယူနိုက်တက် မန်နေဂျာ မဖြစ်နိုင်စရာ အကြောင်း မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဘရိုက်တန်ရဲ့ ကစားဟန်ဟာ တကယ့်ကို ကောင်းပါတယ်။ အကယ်၍ သူသာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ လက်ရှိ ကစားသမား အစုအဖွဲ့ကိုသာ ရခဲ့မယ် ဆိုရင် ဘယ်လို ဖြစ်လာနိုင်မလဲ ဆိုတာ စိတ်ကူး ကြည့်လိုက်ပါ။
ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဖြစ်လာဖို့တော့ မရှိပါဘူး။ သူဟာ သိပ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု မရှိ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သာ ယူနိုက်တက် ပရိတ်သတ် တစ်ဦး ဖြစ်နေပြီး ဘရိုက်တန်ရဲ့ ကစားဟန်ကို ကြည့်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ပေါ်တာ အနေနဲ့ ကိုယ့်အသင်းရဲ့ မန်နေဂျာ ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြသနာ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရန်းနစ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော့် ဘက်က သိပ်မသေချာပါဘူး။ သူ ရောက်မလာခင်တုန်းက အားလုံးက သူဟာ ဘယ်လို တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ ပါရမီရှင် တစ်ဦးလဲ ဆိုတာ ပြောနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ ယူနိုက်တက်ဟာ ဆိုးရှား လက်ထက်က အသင်းနဲ့ တူတူပါပဲ။ ဘာတွေ ပြောင်းလဲ သွားလို့လဲ?” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
Previous Article ဘာစီလိုနာ ကစားသမားဟောင်းတွေထဲက နေရာအလိုက် အကောင်းဆုံး ၄ ဦးကို ရွေးချယ်ရာမှာ မက်ဆီကို ချန်လှပ်ခဲ့တဲ့ ဒါနီအဲဗက်စ်
Next Article ဒီရာသီ အာဆင်နယ် အသင်း ထိပ်ဆုံးလေးသင်းထဲ မဝင်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ရွိုင်ကိန်း